Iyo HomePod inototsigira Dolby Atmos uye Apple Yakarasika, aya ndiwo mabatirwo azvinoitwa | IPhone nhau
Iyo HomePod inototsigira Dolby Atmos uye Apple Lossless, aya ndiwo maitiro ainoitwa
Chimwe chezvinhu zvitsva zve iOS 15.1 itsva yakatangwa maawa mashoma apfuura kwaiva kusvika kwe Dolby Atmos uye Apple Yakarasika yeApple HomePods. Mupfungwa iyi, yazvino vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu inobvumidza iwe kumisa aya mabasa anovandudza ruzivo rwemushandisi. Iyi pasina mubvunzo yaive imwe yezvakanakisa zveiyo sisitimu yekushandisa uye ikozvino tinogona kuimisa pane vatauri. Chinhu chakakosha chekuchengeta mupfungwa ndechekuti activation inoitwa nemaoko, saka nhasi tichaona kuti tingazviita sei pane mukurukuri wedu.
Gadziridza uye shandisa iyo Imba app kumisa Dolby Atmos uye Apple Yakarasika
Zviripachena chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuti tinakirwe nemimhanzi pasina kurasikirwa uye spatial odhiyo ndeyekuvandudza mudziyo wedu. Izvi zvechokwadi isu tatoziva maitiro ekuzviita sezvo iri chiitiko chakajairika kune vazhinji vashandisi vasina otomatiki zvigadziriso zvinoshanda. Nenzira iyi zvatinofanira kuita ndizvo vhura iyo imba yekushandisa, tinya museve uri pakona yekumusoro kuruboshwe uye pinda "Home settings". Kana izvi zvaitwa, isu tinosarudza iyo imba inogadzirirwa iyo HomePod uye pazasi tinogona kuona "Software kugadzirisa".
Zvinonzwisisika danho iri ndiro kiyi yekukwanisa kushandisa mamwe mabasa ari muchikamu chakati siyana. Takapinda Zvirongwa zvekumba uyezve mune imwe yemaprofile emushandisi inowanikwa pasi peVanhu. Ikoko tinofanira kuwana Apple Music uye mukati tinowana iyo Yakarasika Audio uye Dolby Atmos sarudzo. Kana yangoitwa, isu tine yedu HomePod yakagadzirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomePod » Iyo HomePod inototsigira Dolby Atmos uye Apple Lossless, aya ndiwo maitiro ainoitwa
Ziva kuti Dolby Atmos inongoenderana neyekutanga Kumba Pod (iyo hombe) yeiyo mini inongogoneswa Lossless. Uye nekuda kwechimwe chikonzero chinoshamisa kana iwe ukabatanidza maviri Imba Pod mini mune stereo kune Apple TV zvinokwanisika kuvateerera muDolby Atmos. Apple zvinhu ‍♂️
iOS 15.1 haigadzirise matambudziko ebhatiri ekare iPhones